Umkhiqizo wepayipi lokugezela kanye nokugcinwa kompompi wokugezela
Ikhaya / Umhlahlandlela Wompompi / Umkhiqizo wepayipi lokugezela kanye nokugcinwa kompompi wokugezela
2020 / 10 / 26 UkwahlukanisaUmhlahlandlela Wompompi 8691 0
Umkhiqizo wepayipi lokugezela
1: IGROHE Isikebhe sokugeza
IGerman GROHE Group yasungulwa ngo-1936. I-GROHE Group ine-8% yamasheya emakethe yomhlaba futhi ingumkhiqizi ohamba phambili wezindawo zokugezela eYurophu nasemhlabeni jikelele. Ungumhlinzeki owaziwa umhlaba wonke wemikhiqizo nezinhlelo zokuhlanzeka kanye nomthengisi wezinto emhlabeni wonke.
I-GROHE iwina ngekhwalithi yayo ephezulu, ubuciko obuvelele nocwaningo olunzulu nentuthuko. Ihlanganisa ngempumelelo ubuciko obuhle kakhulu nokuklanywa okuhle, futhi iveza ubuhle nentelezi engapheli ezindlini zokugezela emhlabeni wonke.
2: Igumbi lokugezela lamaMoen
Ngo-1937, u-Al Moen waphayona umpompi wokuxuba amanzi ashisayo nabandayo emhlabeni owodwa. Iphephabhuku elidumile i- “FORTUNE” labala umpompi wamanzi ashisayo nabandayo kaMoen “njengomunye wemikhiqizo eyikhulu ehamba phambili yaseMelika ngekhulu lama-100.”
Uchungechunge lwemikhiqizo kaMoon lunebanga eliphelele futhi lufanele izidingo zezindawo ezahlukahlukene. Zisetshenziswa kabanzi ezindaweni zokuhlala ezisezingeni eliphakeme, amahhotela aphezulu, izindlu zezindlu, amafulethi, izakhiwo zamahhovisi ezentengiselwano kanye nezakhiwo zomphakathi ezahlukahlukene. Emkhakheni wemishini yamapayipi kanye nabahlali abajwayelekile e-United States naseCanada, imikhiqizo yamaMoen yaziwa kakhulu ngabesifazane nezingane. IMoen® ibuye ibe ngumkhiqizo owaziwayo eNyakatho Melika kanye nomphakathi onamanani aphezulu okuthenga. Emhlabeni, imikhiqizo yamaMoen iyathandwa ngabasebenzisi emhlabeni wonke ngobuchwepheshe babo obuhle kakhulu, ubungcweti obuthuthukisiwe, kanye nensizakalo ephelele yokuthengisa ngemuva, futhi bajabulela idumela eliphezulu.
UHansgrohe usungule induku yokugeza yokuphakamisa yokuqala emhlabeni kanye neshawa esishintshashintshayo, esaziwa nge- "Mother of the World Shower". Imiklomelo engaphezulu kwama-300 yamazwe omhlaba yenze iHansgrohe Group yaba uphawu lokugezela olubaluleke kakhulu nolunobuciko emhlabeni namuhla.
UHansgrohe uzibophezele ekukhiqizeni izihlambi, ompompi kanye nesethi ephelele yemishini yokugeza, futhi uzinikele ekwakheni indawo yokugezela efudumele nenethezekile yamakhasimende.
Ukugcinwa kompompi wokugeza
1. Sicela ube nabachwepheshe abanolwazi nabaqeqeshiwe bokufakwa. Lapho ufaka, isikulufu esiqiniselwe ekugcineni kwethumbu kufanele sizame ukungashayi izinto ezilukhuni, futhi ungashiyi usimende, iglu, njll ebusweni, ukuze kungalimazi isicwebezelisi sengubo yaphezulu. Uma ompompi bakho besetshenziswa endlini esanda kwakhiwa, ngoba inethiwekhi yamapayipi okuhambisa amanzi isanda kuvulwa, nakanjani kuzoba khona ukungcola okufana nesihlabathi esisemanzini. Ngaphambi kokufakwa, sicela unake ukususa imfucumfucu epayipini, bese ukhipha amanzi isikhathi eside kuze kucace ikhwalithi yamanzi ngaphambi kokufaka ompompi.
2. Ungasebenzisi amandla adlulele ukudala umonakalo wokwenziwa lapho uvula futhi usebenzisa, vele uwuphendule ngobumnene. Ngisho nompompi wendabuko awudingi ukujijwa ngomzamo omkhulu.
3. Ubuso bompompi kufanele busulwe buhlanzeke ngemuva kokusetshenziswa okujwayelekile. Ungasebenzisi isibambo sepompo njengesandla sokubamba noma ukusekela.
4. Lapho ingcindezi yamanzi ingekho ngaphansi kuka-0.02mpa, ngemuva kwesikhathi sokusetshenziswa, uma umphumela wamanzi utholakala wehla, noma i-heater yamanzi icishiwe, unqamule ukugeleza kwamanzi abandayo nashisayo, bese usebenzisa ukudonsa ukuze uqaqe kahle umlomo wombhobho wamanzi endaweni ephuma amanzi ompompi Isembozo sesikrini, ngemuva kokuhlanza ukungcola, sikufake ngokucophelela, futhi ngokujwayelekile sizolulama njengakuqala.
5. Ipayipi lensimbi lekhanda leshawa lompompi wobhavu kufanele ligcinwe lisesimweni semvelo eseluliwe, futhi ungalihlanganisi ompompi lapho ungasetshenziswa. Ngasikhathi sinye, uma usetshenziswa noma cha, qaphela ukuthi ungakhi i-angle efile ejoyini eliphakathi kwepayipi nomzimba we-valve, ukuze ungaphuli noma ulimaze ipayipi.
Edlule :: Ukubuyekezwa Kwompompi WeDelta: Umhlahlandlela Wokuthenga Wekhishi, Indlu Yokugeza, Amasistimu Weshawa, kanye ne-Pot Fillers Olandelayo: Khetha isikulufu esiqiniselwe ekugcineni kwethumbu esisebenza ngamanzi esihambisana kakhulu nezindinganiso zokuphila zesimanje
2020 / 11 / 19 5289